Bilbila sobaa halkani isin jeequ maaliin ofirraa ittiftu? - BBC News Afaan Oromoo
Bilbila sobaa halkani isin jeequ maaliin ofirraa ittiftu?
28 Caamsa 2018
Goodayyaa suuraa Waamicha hin beekamne
Osoo hirriba keessaa sirriitti hin dammaqiin aariidhaan deebistu ta'a, garuu sagaleen maashinaan waraabame kun sagalee 'roobootiidhaan' waan isin jettan osoo hin dhageeffatiin irra deddeebi'ee isin jeeqa. Rakkoon 'robollamanda' isin qunnamee beekaa?
'Sagalee waamicha roobootii' afaan Ingiliziitiin ('robocalla') jedhama.
Kun akkuma ergaan sobaa karaa toora iimeelii keenyaan nutti ergamu, sagalee sobaa karaa bilbila keenyaa nutti ergamuudha.
Dhaabbileen baayyeen kana hojjetan kan seeraan galmaa'an ta'anis fakkeenyaaf, paartiiwwan siyaasaa yeroo duula filannoo Kanaadaa ykn Ameerikaa irraa, beeksisaawwan daandiiwwan xiyyaaraa ta'anis dhaabbileen daldalaa hedduun hojii daldalaa keessatti itti fayyadamaa jiru.
Akka tasaa guyyaa tokko ykn torban tokko keessatti yeroo baayye irra deddeebi'anii isiniif bilbiluu danda'u. Kampaanonni tokko tokko diskii daqiiqaa tokko keessatti si'a kumaan lakkaa'aamu kan baayyee teeleemaarkerii caalu fayyadamu.
Yeroo tokko tokko lakoofsa hin mullanne fayyadamu, yeroo tokko tokko ammoo lakkoofsa sobaa ykn lakkoofsota dhugaa kan nama jalaa hatame osoo abbaan isaa hin beekiin itti fayyadamu.
Goodayyaa suuraa Lakkoofsa hin beekamnerraa waamicha wayita siif dhiyaatu
Yeroo baayyee bilbiloota akkasii kana duukaa bu'anii adda baasuun rakkisaadha. Sababiin isaa yeroo baayyee tekinooloojii bakka jiran isaan dhoksuu danda'u fayyadamu.
Yoo "robollamada" ykn sagaleen sobaan isin ga'e maal gochuu qabdu.
Goodayyaa suuraa Yoo sagaleen sobaa si ga'e hin deebisin
Akka toora warra sagalee sobaa namatti ergan kana keessa hin galle gochuudhaaf waantonni taasifamuu qaban hedduun jiru.
Goodayyaa suuraa Sagalee sobaa ofirraa ittisuuf cufuu dandeessa
Filannoowwan shanan ittiin ofirraa ittisan:
1.Lakkoofsota sana arkaan cufuu: Yoo lakkoofsi walfakkaatu yeroo baayyee sitti bilbilama ta'e ofuma keessan ofirraa cufuu ni dandeessu. Yeroo bilbila keessan kan dhiyoo bilbilame keessa ilaaltan, "cufi"/"block" filannoo jedhu ykn lakkoofsicha akka kan "sobaa"/ "spam" ta'e gabaasaa.
2.Dhaabbata tajaajila bilbilaa isiniif dhiyeessu akka eegumsa isiniif taasisuuf gaafadhaa: Baasii addaa kan isin baasisu ta'uu danda'a, garuu yeroo baayyee sagalee sobaan isiniif bilbilamu kanaan bayyee kan rakkattan yoo ta'e baasii baasuu wayya.
3.Appilikeeshiniidhaan eeggannoo ofii taasisaa : YouMail, Nomorobo, RoboKiller, TrueCaller ykn Hiya kanneen jedhaman rakkoo kana hambisuuf qophaa'an. Isaan argachuuf, yeroo baayyee waggaadhaaf isin galmeessu.
4.Bilbila harkaa kan sagalee sobaa namatti ergu adda baasuu danda'u bitadhaa: Moodeloonni Saamsangii ykn Googiliin bilbila kan sobaa ta'uu shakkamu ni akeekkachiisu.
5."Bibila keessan keessaa kan 'hin jeeqiin"/ "do not disturb" filannoo jedhu fayyadamuun namoota yeroo hundaa si qunnaman qofaaf kaasuu ni dandeessu: Andirooyidiifi aayifooniin kana of keessa qabu.
Goodayyaa suuraa Bilbila kee keessaa hin jeeqin kan jedhu tuqi
Mobaayilii fi ismaartfoonii